လှည်းမော်ကွန်း - ထို rayhab
MUSIAD Sivas TÜDEMSAŞ Views
လွတ်လပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်း '' နှင့်စီးပွားရေးသမားများရဲ့အသင်း (MUSIAD) Sivas ဌာနခွဲကသမ္မတ Salim Eminoğluနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များTÜDEMSAŞသွားရောက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုများသွားရောက်လည်ပတ်သူကိုရုံးအတွင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာ Mehmet BaşoğluEminoğluနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပတ်သက်. TÜDEMSAŞ [ပို ... ]
Karasu: "Sivas TÜDEMSAŞနီလိုင်းဖြစ်ပါတယ်"
ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ Sivas လက်ထောက်ကြှနျုပျတို့ကို Karasu ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်, အမျိုးသားညီလာခံတွင်သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာဖေဖော်ဝါရီလအပေါ် 8 Sivas ၌သူ၏ချီတက်ပွဲမှာလုပ်ဂတိတော်တို့ကိုဝေဖန်ခဲ့သည်။ Karasu "Dikimevi အတိတ်နှင့်သင်တို့သည်ဤစက်ရုံများသည်ဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု Sivas ပါဘူးပိတ်ဖို့ [ပို ... ]
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Kayseri ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရှိခဲ့ပါတယ်TÜDEMSAŞ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် 25 ၏ Kayseri ကုန်သည်ကြီးများ။ စက်ထုတ်လုပ်ခြင်း Group ၏ရေးစပ်ကော်မတီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်လည်ပတ်သူတစ်ဦးစီးရီးဖျော်ဖြေဖို့ Sivas သို့ရောက်ကြ၏။ အထွေထွေမှTÜDEMSAŞ Kayseri ကုန်သည်ကြီးများကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေဖြင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၏ Sivas ကုန်သည်ကြီးများအသင်းသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် [ပို ... ]
မီးရထားအလုပ်သမားများသမဂ္ဂနှင့်ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပို့ဆောင်ရေးနှင့်TÜDEMSAŞလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Mehmet Başoğluသူ့ရုံးခန်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကြောင့်ပြုမိသောBaşoğluစာမေးပွဲဖြေဆိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်စည်းမျဉ်းများဖွင့်လှစ်ခေါင်းစဉ်များ၏ပြောင်းလဲမှုကိုကျေးဇူးတင်အားဖြင့်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပယ်ချရန်အဓိကအားဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
TÜDEMSAŞ Debate Sivas အတွက်ကြီးထွားလာ!
ငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်သုံးသည့်အဓိကအများပြည်သူကုမ္ပဏီများကန်ထရိုက်တာ, စက်ခေါင်းများနှင့် Railcar စက်မှုလုပ်ငန်း, TÜVESAŞနှင့်လှိုက်လှဲမှုမရှိမှဦးဆောင်TÜDEMSAŞတဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာစုဆောင်းရန်လေ့လာမှုများ။ Sivas ၌ဤအသစ်သောအဖှဲ့အစညျးမြားအကွောငျးမီးရထား Adapazari, Eskisehir နှင့်3[ပို ... ]
ကုန်တင် Wagon ဘရိတ်စနစ်တူရကီအတွက်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်
100% ကုန်တင်လှည်းမွေးမြူစီမံကိန်းတွင်ပစ်မှတ်, ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ် braking စနစ်နှင့်နောရ် Sivas အတွက်TÜDEMSAŞစက်ရုံအတွက်မန်နေဂျာ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံအများအပြားနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးရှိခြင်း Bremse ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျစ်လစ်သိပ်သည်းဘရိတ်စနစ်၏ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ [ပို ... ]
TÜDEMSAŞရည်မှန်းချက်များ, Cargo Wagon ထုတ်လုပ်မှုရာရာခိုင်နှုန်း Localization မှ
ခေါင်းဆောင်မှုTÜDEMSAŞလက်အောက်တွင်မှုနှုန်းအပေါ်မွေးမြူလေ့လာမှုများထုတ်လုပ်ကုန်တင်လှည်းအတွက် 100% မလြော့နေဆဲဖြစ်သည်။ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုမှာနှင့်ကားထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်တူရကီအတွက်ဘရိတ်စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ဘို့နည်းပညာလေ့လာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းနည်းပညာ [ပို ... ]
ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားယာဉ်ပို့ဆောင်ရေး Wagon အဆိုပါကန်ထရိုက်တာထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာသေးအခြားဒေသခံအတွက်ပထမဦးဆုံးနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုသွင်းယူနှင့်ဒေသခံများနှင့်အမျိုးသားရေးကားတစ်စီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလှည်း generate သိရသည်။ ယာဉ်ပို့ဆောင်ရေးလှည်းTÜLOMSAŞ, ထိုကဲ့သို့သောလယ်ထွန်စက်နှင့်ပိတ်ထားသောအဖြစ်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကားအလင်းကိုစီးပွားဖြစ်မော်တော်ယာဉ်များ, minibuses, သွင်းကုန်အတွက်ထုတ်လုပ် [ပို ... ]